Su'aal: Midkee ayaan ka dhex dooran karaa internetka?
Jawaab: Söderhamn Närawaxa ay hesaa Sadex nooc oo kala duwan oo xidhiidh ah oo aadna ka dooran karto midka aad rabto ayda oo ku xirantahay halka aad ku nooshahay.
Qadka via kabel-TV iyo fiber-LAN waxa loogu baahan yahay gurigaada ama deegaankaada in ay ku xirnadaan Söderhamn Nära shabakadeeda. Hadii Adan haysanin shabkada Söderhamn Nära Waxaa dooran kartaa ADSL oo kuugu xiraayo telefankaada guriga.
Isku xirka mashiinka TV ee cable kaas oo ka faa'iideysanaya shabakada TV xariirka ee isgaarsiinta internetka.
Waxaad dooran kartaa inta u dhaxeysa 0.5 Mb, 8 MB iyo 30 Mb.
Marka aad isdiiwaangaliso, waxaad heli doontaa lacag hal mar ah oo ah 400 kr, oo ah modeemka.
Waxaad ku bixin kartaa kaarkaaga qaybta qaabilaada ama waxaad ku dari kartaa faktuurada dambe ee bisha kuu imaaneyso
Waxii xariirka LAN-ka ah uma baahnid inaad ku xariirsato . Xariirin taas oo aad heysato waa toos nätverkskabel i datauttaget. Waxaad dooran kartaa inta u dhaxeysa 0.5 / 0.5 Mb, 10/10 Mb, 30/10 Mb, 100/10 Mb iyo 100/100 Mb. Lacag laguma xirayo. Muddada lacagta waa 1da bisha.
ADSL-marka laguu xiro waxaa kuu warqada lacag bixintii ugu horeysay qiimaheeduna waa 1295 kronor waxaa la jiro qiimaha modemka.
Waqtiga uu kuu xariirsany yahay waa 12 bilood ka dibna 1da bisha waa mudadda lagu ogeysiinaayo.
Diiwaangelintu waxay qaadan kartaa 7-10 maalmood oo maalin shaqo ah.
Macaamiil ahaan, waxaa lagugu soo wargelinayaa telefoon markaad rabto inaad xiriir la yeelatid sidaa daraadeed waa muhiim in aad ka jawaabto telefoonka. Wicitaanku wuxuu ka iman karaa lambar qarsoodi ah.
Marka la guurayo
Su'aal: Maxaan sameeyaa marka aan guurayo?
Jawaab: Waxaa waajib ah in aad la xariirto Söderhamn Nära marka aad u guureyso guri kale, hadii kale ma ogaan karaan in aad guurtay marka waxaa dhici kara an aad bixiso koronto iyo qadkaba kaadii hoe iyo kan cusub. Hadiiba guureyso waxaa kuu fudud in aad ugu bogga netka. Haddii kale, ka wac adeegga macaamiisha ama nagu soo booqo Stabbläggaregatan 11.
Hashiiska joojinta kirada wuxuu quseeyaa qofka konturaada heysto.
Xusuusnow in aad soo gudbiso adreeskaaga cusub (hadii kale amar bixinta biilka la socodsiiso) hadii kale kuuma iman doonto warqadaada lacag bixinta.
Tani waxa ay sababi kartaa in aad ku qanciwyda qiimaha dheedka ee luguu soo diraayo adiga oo ah macaamiisha.
Su'aal: Maxaan sameeyaa haddii aan dhibaato kala kulmo kuleylliyaha, biyaha, telefishinka ama internetka?
Jawaab: Haddii ay dhacdo dhibaatooyin ku saabsan guriga aad kirada ugu degen tahay sida kuleylisada, biyaha iyo telefishinka, fadlan la xiriir malkiilayaasha.
Haddii ay internetka tahay, wac tel. 0270-199 99.
Film: Diwaangalinta bulshada